ओलीले प्रचण्डलाई भने : अहिले पार्टी फुटे बराबर छ, तपाईंले मेरो टिममा बस्ने कि माधव नेपालकोमा ? – Online Sunapati
मुख्य पृष्ठ /News/ओलीले प्रचण्डलाई भने : अहिले पार्टी फुटे बराबर छ, तपाईंले मेरो टिममा बस्ने कि माधव नेपालकोमा ?
काठमाडौं, २० असार । शीर्ष नेताहरूको कटुतासँगै नेकपाका कार्यकर्तामाझ एउटा चिन्ता गढेको छ– कतै एकता भत्किने त होइन ? नेकपा फेरि फुट्ने त होइन ? मेलमिलापको अपेक्षासहित दुई अध्यक्ष एक–एक विश्वासपात्रसहित शुक्रबार तीन घण्टा बसे। जति बसाइ लम्बिँदै गयो, शुभेच्छुकको आशा बढ्दै गयो। तर, छुटुन्जेलमा मन त माझियो। कुरा बाझिएरै रह्यो।
‘दुई अध्यक्षबीच खुलेरै कुराकानी भएको छ’, अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच भएको छलफलमा सँगै रहेका स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्माले भने, ‘तर, विषयवस्तुमा ठोस सहमति भएको छैन। अर्को राउन्ड फेरि छलफल हुने भएको छ।’ छलफलमा महासचिव विष्णु पौडेल पनि थिए। उनले पनि सञ्चारमाध्यमलाई ओली र दाहालबीच खुलस्त कुराकानी भएको र आफूलाई लागेका कुराहरू दुवै अध्यक्षले राखेको जानकारी गराएका थिए।सम्बन्ध नट गुड, नट ब्याड (न राम्रो, न खराब) भयो’, बैठकको उपलब्धिबारे बालुवाटार स्रोतले भन्यो।
तिहारमै जिवनभर भुल्न नसकिने पीडा, अब कहिल्यै तिहार नआए हुन्थ्यो